Hawlaha | Booqo Hultsfred
Maxaad dooneysaa inaad sameyso maanta?
Baaskiil fuula, kalluumeysi, baaskiil wadid, dabaasha ama maxaad u socon weyday Hultsfred The Walk oo wax badan ka baro ciidaha ugu halyeeyga Iswiidhan? Halkaan waxaa ka jira nashaadaadyo badan - waana hubaal wax adiga kugu habboon!
Golf disc ama golf frisbee sida sidoo kale loogu yeero waa ciyaar lagu ciyaaro saxan (frisbee). Dhererka koorsadu waa 780 mitir, wuxuu ka kooban yahay 9 godad iyo
Haro kayn leh kalluumeysi jiilaal wanaagsan. Örsjön waa haro yar oo dhagax weyn leh oo ka kooban saddex qaybood oo cidhiidhi ah. Hareeraha waxay ka kooban yihiin keymo coniferous geesahana waa
Harada leh carp weyn. Färgsjön waa tusaale wanaagsan oo ku saabsan sida harada yar ee kaynta ay u noqon karto eldorado kalluumeysiga isboortiga. Dayrta
Haro leh kalluumeysi pikeperch ah oo darajo leh. Hjortesjön waxay ku taal galbeedka Virserum, waxay u dhowdahay Virserumssjön oo iyana ay ku xiran tahay. Harada ayaa ku liidata nafaqooyinka
Ku raaxayso dabaylo deggan iyo daqiiqad xasilloon oo ku taal biyaha Hulingen ee quruxda badan. Si aad si aamusnaan leh ugu dul dul dhaqaaqdo oogada biyaha, joogso cidhifka xeebta si aad u quusto
Linden waa haro weyn oo nafaqo liidata leh oo leh biyo nadiif ah iyo dhowr jasiirado yaryar. Kaymaha geedaha, xayawaanka loo yaqaan 'porcupine', buluugga iyo kululeynta ayaa ku badan harada. Harada ayaa qoto dheer
Stora Åkebosjön waxay ku taal meel qiyaastii 6 km galbeed ka xigta Hultsfred waadna heli doontaa hadaad ka wado wadada 34 ilaa Hammarsebo kuna sii jeeddo Stora Hammarsjön. Harada
Buurta ceel dhagax
Magaalada Silverdalen waxaad ka heli doontaa buurta godka quruurux. Faallooyinka
Prästkragegärdet oo ku taal Vena, waxaa ku yaal buur ku habboon xayiraadda iyo barafka.
Xaafadda "Slätten" ee ku taal bartamaha Hultsfred waxaad ka heli doontaa Slättenbacken, buur yar oo saxan. Waxa kale oo jira aag hilib lagu dubto iyo nalal.
Goobta ciyaarta ee Silverdalen
Goobta lagu ciyaaro ee 'Silverdalen' - waa goob lagu ciyaaro iyo xumaan! Qalabka iyo soojiidashada Swings Combi waxay ku ciyaaraan aagga Sandbox Hilibka Hilibka Loogu talagalay Miiska (helitaanka waa la waafajiyay)
Goobta ciyaarta ee Mörlunda
Ku ciyaar agagaarka garoonka Mörlunda - waxaa jira waxyaabo xiiso leh oo halkan laga ogaan karo! Qalabka iyo soojiidashada Jir fuulista ciyaarta Ciyaarta caruurta yaryar Isbaarada
Qolka qubeyska ee Virserum waa goob yar oo lagu maydho oo leh barkad kululeysa oo cabbirkeedu yahay 12,5 x 6 mitir. Barkadu waxay leedahay mool ka hooseeya 0,9 ilaa 1,5 mitir.
Saqafka ayaa ku tuntay dabaylo ku socda waddooyin yar yar oo socodkiisu yar yahay. Haddii aad doorato inaad baaskiil ku waddo masaafada oo dhan, waad sugi kartaa
Wareeg wareegga wadada cidhiidhsan Flaten - Gårdveda
Dharka Baaskiil wadista ee Smalspåret Flaten - Gårdveda Waa waayo-aragnimo muuqaal ah oo ku habboon qoyska oo dhan. Saldhigga Flaten waxaad ka heli doontaa baaskiil wadista dharkayaga. Waxaa jira baarkin baabuur iyo
Björnnässlingan waa keyn sixir dhab ah oo leh geedo duug ah oo hareeraha ka taagan dhagxaanta lagu daboolay liin dhanaanta. Keydka dabiiciga ee Björnnäset wuxuu ku yaal
Magaalada Järnforsen, waxaa ku yaalo shabakad socod dheer oo tamashle ah, dhammaantoodna waxay ka bilaabmayaan meel ka baxsan bulshada. Bilowga waxaa jira
Khibrad u yeelo dareenka raacida basaska tareenka caadiga ah ee oranji-huruudda ah ee neefsada 50s inta u dhaxeysa Virserum iyo Åseda. Ku raaxayso jawiga nostalgia oo ku qaxwo toddobo
Wadada cidhiidhiga ah ee Hultsfred-Västervik
7 km oo dherer ah iyo 891 milimitir oo ballac ah, waxay ka bilaabmaysaa kaymaha Småland ee galbeedka, harooyinkii hore, bulshooyinka yaryar iyo beeraha ilaa dhul jasiiradeedka ku yaal
Bandhigga "Home Sweet Hultsfred" oo ka hadlaya sheekada ururkii Rockparty iyo Bandhigii Hultsfred. Sheekadu derbiyada ayey ku jirtaa! Bandhigga ku saabsan Rockparty iyo Hultsfred Festival waxaa laga heli karaa qolka Klubben ee qeybta hoose
Waxaan ku aragnaa xiddig qof walba. Stefan baska dhexdiisa, Hanna adeegga daryeelka guriga ugu yaraan adiga kuguma jiri karto! Kooxda kaftanka ah ee tarjumaadda muusigga ee Infallet ayaa muujineysa sida
Dackestupet - Baaskiil buur iyo baaskiil buur
Dusha sare ee Dackestupet's slalom, waxaad ka arki kartaa muuqaalka cajiibka ah ee muuqaalka Småland. Safar aad hoos ugu dhigeyso buuraha barafka, waxaad ku mari doontaa caqabado dhisan
Padel waa ciyaar raket ah oo loo arki karo isku dhafka tennis-ka iyo squash. Waxa lagu ciyaaraa maxkamd laba qaybood oo kala badh ah oo shabaq ahi kala sooceen.
Hjortenleden waxaad ku dhex socotaa waddooyinka quruuruxsan ee wanaagsan iyada oo loo marayo muuqaalka beeraha iyo tuulooyinka, oo lagu dhex daray wadooyin yaryar oo loo maro kaynta.